02/03/2018 - Page 2 sur 5 -
Fianarana any ivelany : Amerika no mahasarika ireo tanora
Ankoatra an’i Frantsa, mahasarika ny tanora malagasy amin’izao fotoana izao ny mandranto fianarana any Etazonia. Ankoatra ny mari-pahaizana azo eto an-toerana, dia ilaina ihany koa ny mampitombo ny fahalalana amin’ny oniversite any ivelany. Mba hanamorana …Tohiny
Rakotoarisoa Henintsoa Raphalk : Nafenin’ny sipany nandritra ny tapa-bolana
Tra-tehaky ny zandary teny Malaza Fenoarivo ny alahady 25 febroary lasa teo tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany maraina i Rakotoarisoa Henintsoa Raphalk, rehefa nafenin’ny sipany nandritra ny 14 andro. Ity farany, dia iray …Tohiny
Tsaralalàna : Olon-tsy meloka no notifirin’ny polisy ?
Araka ny fanadihadiana natao, dia nambaran’ireo olona nanatri-maso ny zava-nisy teny Tsaralalàna ny tolakandron’ny alarobia lasa teo tokony ho tamin’ny 02 ora , fa tsy jiolahy velively ilay lehilahy manodidina ny 20 taona maty notifirin’ny …Tohiny
Seranam-piaramanidina Ivato : Teratany vahiny voasoloky
Lehilahy teratany vahiny iray no niharan’ny asa fisolokiana teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato, ny alarobia lasa teo. Araka ny loharanom-baovao, dia nisy lehilahy antsoina hoe Zidane nanatona ity vazaha ity, ary nilaza azy ho “guide” …Tohiny